ဒီ detox အစီအစဉ်ကို2ရက်ပေါင်းအားဖြင့်သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှရှိသမျှသောအဆိပ် Remove - ကျန်းမာရေး PLUS MAG - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ ကျန်းမာရေး PLUS MAG - »ဒီ detox အစီအစဉ်ကို2ရက်ပေါင်းအားဖြင့်သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှရှိသမျှသောအဆိပ်ဖယ်ရှားပါ
ဒီ detox အစီအစဉ်ကို2ရက်ပေါင်းအားဖြင့်သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှရှိသမျှသောအဆိပ် Remove - ကျန်းမာရေး PLUS MAG
Tele RELAY တစ်ခု 21 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
ကြိုဆို / ပါးသော / ပိန်စေအစားအစာ / ကုသ detox /
detox အစီအစဉ်၏ဒီ2ရက်ပေါင်းအားဖြင့်သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှရှိသမျှသောအဆိပ်ဖယ်ရှားပါ
by: Amelie B ကို
Published: ဖေဖော်ဝါရီလ 20 2019
နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကျနော်တို့အများအပြားအဆိပ်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ အသက်ရှူခြင်းသို့မဟုတ် ingesting အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းတွေသောအခါ, ငါတို့ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကျနော်တို့မလွှဲမရှောင်ရောဂါ၏ညှနျကွားယူတွန်းအားပေး။ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တခါတရံမထိုက်မတန်ရစွန့်ပစ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အနည်းငယ်အကူအညီနဲ့လိုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား, detox ကုသဖြစ်နိုင်ကျေးဇူးတင်စကားပါ!
အဆိုပါ detox ကုသ: ကျနော်တို့မကြာခဏတကယ်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖွင့်သင့်ပါတယ်ရှိမရှိသိရှိခြင်းမရှိဘဲ, နားထောင်လော့။ သူတို့ကဘာတွေလဲ? သူတို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ? ကျနော်တို့ရေရှည်မှာပြုရပါမည်နည်း ရှင်းလင်းချက်။
- အ detox, quèsaco?
အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တ္ထုများ (အရက်, ဆေးလိပ်, ထို့အပြင်ပြည့်အဆီ, ကြာရှည်, အရောင် ... ) မှထိတွေ့မှုအစှမျးသတ်တိမှာခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးပွောငျးလဲထားတဲ့ပြည်တွင်းရေးညစ်ညမ်းမှုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာခြင်းကိုသည်းခံ။ ဤသည်အများအပြားလက္ခဏာတွေမြင်သည်: မောပန်းခြင်း အိပ်စက်ခြင်းမမှန်, အစာခြေပြဿနာများ, အရေပြားရောဂါသို့မဟုတ်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်နာတာရှည်။
တစ်ဦးက detox ကုသမှုသည်ဤကိစ္စများတွင်အကြံပြုသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အစားအစာများ, အူ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတိုးမြှင့်ဖို့ Anti-inflammatory နှင့်ဓါတ်တိုးသတင်းရင်းမြစ်, အသည်း, ကျောက်ကပ်, အဆုတ်နှင့်အသားအရေဖျန်အာရုံစိုက်အသုံးပြုပုံရက်အနည်းငယ်ကသူ့အစားအသောက်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ဖျက်သိမ်းရေး၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ Named, သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီအဆိပ်၏ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။
ကျောက်ကပ်: သူတို့အဆိပ်, filter မှေးမှိန်နှင့်ဖယ်ရှား
အရေပြား: က sebum နှင့်ချွေးများကအဆိပ်ဖယ်ရှား
ထို့ကြောင့် detox ၏နိယာမအရသိရသည်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုးတက်စေရန်ညာဖက်အစားအစာများကိုစားသုံးရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းရေးကိုကူညီရန်အတွက်၎င်း၏စွမ်းရည်များနှင့်ဖြန့်ချိအဆိပ်မြှင့်တင်ရန်, ဒီမှာနှစ်ရက်ကြာ detox အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
- detox ၏နှစ်ရက်ကြာအစီအစဉ်ကို
သကြားမပါဘဲအစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည် 1 ခွက်ကို
သကြားမပါဘဲ oatmeal ၏ 1 ဂျုံယာဂု (နဲ့အတူ ဗာဒံနို့ နှင့်) ပိုက်ဆန်မျိုးစပါးနှင့်အတူဖြန်း
အနည်းငယ်သံလွင်ရေနံနှင့်သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အတူ2ခွက် arugula နှင့်ခရမ်းချဉ်သီး
1 1 ကီဝီနှင့်ငှက်ပျော
ရွှေဖရုံသီးအစေ့မြားသို့မဟုတ် walnuts ၏ 1 လက်တဆုပ်စာ
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသို့မဟုတ်ဟင်းနုနွယ်ရွက်၏½ခွက်ကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားကင်တူနာငါး 150g (ပေါင်း)
2 ခွက် arugula သုပ်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီး
wholemeal မုန့် 1 အပိုင်းအစ
anise နှင့်အတူ 1 လက်ဖက်ရည်
မှောင်မိုက်ချောကလက်၏ 1 စတုရန်း
1 ဂျုံယာဂုအလွှာoat ကြားခြင်းမရှိဘဲ (ဗာဒံနို့နှင့်ပိုက်ဆန်မျိုးစပါးနှင့်အတူဖြန်းနှင့်အတူ)
စိမ်ဂေါ်ဖီထုပ်၏ခွက်ဖြင့်လိုက်ပါသွားကင်ကြက်သား 200g (sauerkraut အမျိုးအစား)
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချို (အာလူး, မုန်လာဥ, ဆလရီ, ငရုတ်ကောင်း) ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် 1
1 သောအဘို့ကို kefir
ပျားရည်နှင့်သီဟိုဠ်၏ 1 လက်တဆုပ်စာ
သံပုရာဖျော်ရည်ကိုအသားတင်နှင့်အတူ 1 beet သုပ်
မုန္လာဥနီကိတ်မုန့် (မုန္လာဥနီကိတ်မုန့်) မှ 1
ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကုသမှုနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလည်းအရေးကြီးသောကြောင်းသတိပြုပါ။ ရေသို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ရည်နှင့် detox ရေကိုရွေးချယ်။ အဆုံးစွန်သောအဘို့, ရိုးရိုးရေ၌လိုက်သည်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် (သံပုရာ, သခွားသီး, စတော်ဘယ်ရီ, ပူစီနံစသည်တို့ ... ) ထားမတ်စောက်သောနှစျဦးမှနာရီနိမ့်ဆုံးကြကုန်အံ့။
ဤသည်ရောဂါပျောက်ကင်းနှစ်ခုကြိမ်တစ်လလျှင်အများဆုံးမှတဦးတည်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်မိန်းမတို့အဘို့အစာခြေမမှန်ခြင်းနှင့်ကျောက်ကပ်, သည်းခြေနှင့်အသည်းပြဿနာများနှင့်အတူလူဆီးချိုရောဂါအကြံပြုသည်မဟုတ်။ အလားတူပင်အချို့သောမူးယစ်ဆေး interaction ကမြင်နိုင်နှင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦး detox ရောဂါပျောက်ကင်းမစတင်မီသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏အကြံပေးချက်ကိုယူပါ။
ဝက်ခြံကြောင့် fix ဖို့ဘယ်လို?
ဤတွင်သင့်အိမ်အတွက်ကြက်သွန်ဖြူတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်ကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် - ကျန်းမာရေး MAG နောက်ထပ်